Part1: xal loo helo: 1 click in ay xogta ka iPhone wareejiyo Huawei
Sida lagu Xusi, ka hor inta uusan suuqa kala iibsiga in ka macruufka in android ma aha arrin haddii barnaamijka software ku haboon loo isticmaalo arrintan la xiriira. Si aad u samayso nidaamka macaan Wondershare MobileTrans waa mid ka mid ah codsiyada in la hubiyo in macluumaadka u dhexeeya qalabka macruufka iyo Huawei waxaa loo wareejiyey kaliya click ah.
Si loo hubiyo in xogta kala iibsiga u dhexeeya qalabka macruufka iyo Huawei ah marna waa arin user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in geedi socodka soo socda waxaa la socda talaabo talaabo talaabo ma boodayo.
Marka codsiga ayaa ku dhameysatay kaalinta rakibo user wuxuu heli doona shaashadda soo socda ka halkaas oo fursad u ah bilowga hadda waa in la soo xulay:
User ayaa hadda ka heli doona shaashadda soo socda ka halkaas oo "Start" doorasho ay tahay in la soo xulay oo ka muuqan doona mar tilmaamaha mouse la dul heehaabayeen telefoonka si ikhtiyaar kala iibsiga telefoonka:
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aan la garaaco button bilowga user ay u baahan tahay in lagu xiro labada telefoonada gacanta sida Huawei iyo macruufka in PC ama laptop kaas Share Wonder ka Mobiletrans ayaa lagu rakibay ah. d. Marka software helo labada telefoonada ee shaashadda soo socda ka muuqan doontaa kombiyuutarka
Marka software helo labada telefoonada ee shaashadda soo socda ka muuqan doontaa kombiyuutarka:
User wuxuu u baahan yahay inuu wax ku dhufto "Start Copy" sida ka muuqata shaxanka hoose si wareejinta xogta ka macruufka ah in ay Android ama bilcaksii bilaabo:
Sida habkaasi waxaa la bilaabay shaashadda soo socda ka muuqan doontaa LCD kombiyuutarka:
User wuxuu u baahan yahay inuu sugo ilaa bar xaaladda ku dhufan doonto 100% si loo dhamaystiro hawsha. Wareejinta xogta ka mid madal mobile si kale marka la dhamaystiro.
Qalab Huawei Popular loo isticmaalay
The Huawei qalab ugu caansan waa in la isticmaalo maalmahan waa Huawei kori Mate 7 taas oo ah wax soo saarka kaliya in la adag ka riixayey Mobile Chinese ah Giant suuqa Maraykanka iyo sidoo.
Toban qalabka Huawei caanka ah ee USA
Ka dib waa toban telefoonada Huawei ugu caansan ee USA. Xogta ayaa laga soo http://consumer.huawei.com/us/mobile-phones/index.htm
1. kori Mate 2 4G
2. Huawei qarka u saaran
5. Huawei kori Y TracFone
7. qeybo 2
Part2: Arrimaha ku saabsan xogta laga qalabka macruufka gudbaayo telefoonada Huawei
Xogta beddelashada ka mid mobile in kale waa wax la arkaa sida wax aan macquul aheyn ka hor farsamooyinka la xidhiidha ayaa lagu bilaabay. Interrelationship Platform waa arrin horay loo suurto ay sabab u tahay olole caalami ah oo barnaamijyada software farsamada casriga ah ma aha oo kaliya xogta ka macruufka wareejiyo Huawei (android) telefoonada laakiin sidoo kale in la hubiyo in aan xitaa xoogaa yar oo kaliya ayaa la beddeli karin. In Duke of horumarinta ee sayniska iyo farsamada waxa aad u nasiib-darro ah in la ogaado in wali wajahaya arimaha xogta ka macruufka gudbaayo Huawei ama qalab kale oo android. Waxaa jira arrimo badan oo ka mid ah wajihi karo halka Abaabulka geeddi iyo kuwa ugu badan ee ku qoran yihiin hoos:
Arrinta interrelation Platform
Hababka macruufka iyo android waxaa lagu dhisay on terminologies kala duwan, waana hubaa in daacadnimada hababka kala duwan waa la ilaaliyay in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah inay ku. Macruufka arrintan la xiriira talaabooyin wax ku ool ah sidaa darteed waa mid naadir ah sidaa arko in virus ah oo weerar ku qalab macruufka ah ee qaab kasta. Dhinaca kale nidaamka android furan yahay illaha iyo qof kasta oo uu heli karo qalabka la xiriira iyo qaar ka mid ah aqoon horumarinta kobcin karin oo codsi android aan wax dhibaato ah. Sidaas darteed waa arrimaha ugu sharafta iyo horumarinta la xiriira in la xaddido kala iibsiga ee xogta ka macruufka qalabka Huawei.
Maqnaanshaha barnaamijka software ku haboon
Inta badan dadka isticmaala marnaba ka heli barnaamijka ku haboon software in xogta laga macruufka wareejiyo qalabka Huawei iyo sabab la mid ah ayaa lagu qoran sida halkan arrin. Nasiib wanaag waxaa jira barnaamijyo la heli karo software hadda taas loo hubiyo in xogta kala iibsiga ma aha arin oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada software waxay leeyihiin kartida duruufaha kala duwan iyo sababo isku mid ah ay badalo xogta macruufka in Android ee heerka aad u degdeg ah iyo qeybsanaan.
Arimaha Source model la xiriira
Users ayaa sidoo kale la kulmi arrimaha la xiriira model isha. Waxaa la soo sheegnay ka hor iyo weliba in qalabka Huawei lagu horumariyo isticmaalaya farsamada ee android ayaa saldhig weyn ee u furan qaybaha il. Sarbeeb The "kariya aad u badan oo booli iyo maraq" khusaysaa android iyo sabab la mid ah cayayaanka gudahood version caqabadda halis ah in dadka isticmaala ay arrintan la xiriira. The cayayaanka ee Kit Kat iyo hurdiga ah heshiis xogta u dhexeeya qalabka macruufka iyo Huawei howl culus aya hortaala ah. Dhinaca kale qalabka macruufka ah waxaa lagu dhisay model il u xiran yihiin la furan qaybaha il taasoo isku halaynta madal oo ka dhigaysa xitaa kala iibsiga ka adag.
> Resource > macruufka > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga macruufka Qalabka inay Huawei Phones